Discrimination | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » Discrimination
Posted by nigimi77 on Feb 15, 2012 in Copy/Paste | 8 comments
ဖင်ကာကွယ်ရေး စစ်ဗျူဟာမှုး တပ်မ ၇၇
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှ စတင်၍ နံနက် ၇ နာရီနှင့် ၁၀ နာရီအတွင်း တစ်ချိန်၊ ညနေ ၄ နာရီမှ ၇ နာရီအထိ တစ်ချိန် ၄ ရက် စမ်းသပ်ပြေးဆွဲပြီး ရလဒ်ကိုကြည့်၍ ဆက်လက် ဆွဲသင့် မဆွဲသင့် စီစဉ်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဓာတ်ပုံ – ဗိုလ်ဗိုလ်ဝင်း
Discrimination is the prejudicial treatment of an individual based on their membership inacertain group or category. It involves the actual behaviors towards groups such as excluding or restricting members of one group from opportunities that are available to another group. It involves excluding or restricting members of one group from opportunities that are available to other groups.
Based on realistic conflict theory and social identity theory , Rubin and Hewstone have higlightedadistinction between three types of discrimination:
Consensual discrimination is driven by the need for accuracy reflects[clarification needed] stable and legitimate intergroup status hierarchies (e.g., favouringahigh status in-group because it is high status).
The United Nations stance on discrimination includesastatement that “Discriminatory behaviors take many forms, but they all involve some form of exclusion or rejection.”
The United Nations had concluded that women often experiencea“glass ceiling” and that there are no societies in which women enjoy the same opportunities as men. The term “glass ceiling” is used to describeaperceived barrier to advancement in employment based on discrimination, especially sex discrimination.
In the United States in 1995, the Glass Ceiling Commission,agovernment-funded group, stated: “Over half of all Master’s degrees are now awarded to women, yet 95% of senior-level managers, of the top Fortune 1000 industrial and 500 service companies are men. Of them, 97% are white.” In its report, it recommended affirmative action, which is the consideration of an employee’s gender and race in hiring and promotion decisions, asameans to end this form of discrimination. In 2008, women accounted for 51% of all workers in the high-paying management, professional, and related occupations. They outnumbered men in such occupations as public relations managers; financial managers; and human resource managers.
The China’s leading headhunter, Chinahr.com, reported in 2007 that the average salary for white-collar men was 44,000 yuan ($6,441), compared with 28,700 yuan ($4,201) for women.
Transgender individuals, both male to female and female to male, often experience problems which often lead to dismissals, underachievement, difficulty in findingajob, social isolation, and, occasionally, violent attacks against them. Nevertheless, the problem of gender discrimination does not stop at transgender individuals or with women. Men are often the victim in certain areas of employment as men begin to seek work in office and childcare settings traditionally perceived as “women’s jobs”. One such situation seems to be evident inarecent case concerning alleged YMCA discrimination andaFederal Court Case in Texas. The case actually involves alleged discrimination against both men and blacks in childcare, even when they pass the same strict background tests and other standards of employment. It is currently being contended in federal court, as of fall 2009, and sheds light on howaworkplace dominated byamajority (women in this case) sometimes will seemingly “justify” whatever they wish to do, regardless of the law. This may be done as an effort at self-protection, to uphold traditional societal roles, or some other faulty, unethical or illegal prejudicial reasoning.
Ref : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.299344530127188.70221.103865773008399&type=3
Ref : http://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination
Ko MawPyay Than Htay
လိင်ခွဲခြားမှုကို မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံးစတင်သူများမှာ အဓိပတိနှင့် ပါရမီတို့ဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။
Kyaw Htin မလိုအပ်တဲ့၊ ပြဿနာ အဓိကအရင်းမြစ်မဟုတ်တာကို အချိန်ကုန်ခံလုပ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တကယ်လုပ်သင့်တာက အရည်အသွေးမှီတဲ့ Bus car တွေကို လုံလောက်တဲ့ အစီးရေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ Bus Line စနစ်တည်ဆောက်ပေးရမှာပါ။ မကောင်းပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူး Priority မှားနေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တကယ့်လိုအပ်ချက်တွေကို မလုပ်ပဲ၊ ဟန်ရေးပြသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Sai T Loong Sex discrimination Starts In Myanmar .
Khun Htunoo ငါတို့ကဗုဒ္ဒဘာသာတိုင်းပြည်ကွ ဒီလိုလုပ်စရာမလိုဘူးထင်တယ်၊ ပညာတတ်ဆိုရင် ဒီလိုလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။
Phyoe Phyoe Nyein ကောင်းပါတယ် ရှိသင့်ပါတယ် ဂျပန်မှာတောင် အမျိုးသမီး သီးသန့် ရထား အချိန်သတ်မှတ် ထားတဲ့ နံနက် 7နာရီကနေ9နာရီထိ ရထားတွဲတွေ ရှိပါတယ်
Aye Chan Phyu တို့တော့ သမီးပျိုလေးတွေ မွေးစားထားတော့ ဒီအစီအစဉ်ကို သဘောကျတယ် ဖေဖေ အလောင်းအလျာတွေလည်း သမီးလေးတွေ မွေးလာရင် ကိုယ်ချင်းစာတတ်လာမယ် …
Aye Theint အဲလိုလုပ်မယ့်အစား လူတွေက ဆင်ခြင်ကြရင်ပိုကောင်းမယ် ခုတော့ အဆင်ပြေဖို့  မလွယ်လောက်ဘူး အချိန်လုပြီး လုပ်နေကြရတဲ့သူတွေ မလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်………….
Bwe Bwe Lay ဘယ်ကနေဘယ်ကိုဘယ်လိုင်းကပြေးဆွဲနေတာလဲ..အမျိုးသမီးသီးသန့်ဆိုတော့ကောင်းဆာပေါ့
Suu Sha သူများနိုင်ငံမှာဆို ကားရှေ့ပိုင်းက အမျိုးသမီးတွေအတွက်လေ .. ဒီလိုတော့ ခွဲထားစရာမလိုပါဘူး … အမျိုးသားအမျိုးသမီးက ကားရှေ့ပိုင်း နောက်ပိုင်းသတ်မှတ်လည်းရပါတယ် သီးသန့်ရယ်လို့တော့ လိုအပ်မယ်မထင်ဘူး
Thet Paing Hlyan အဲဒါဆို..အစ်မက ဂျပန်မှာသွားစီးပါလား….
Thi Ha ကျနော်ကျောင်းသားဘဝတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘတ်စကားလျောက်စီးရင်း လိုက်ထောက်တဲ့ကောင်တွေတွေရင်…ရွံလို့…အထောက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေကို..ကူညီနေကြ..
Aye Chan Phyu မြန်မာ အမျိုးသား တိုင်းဒီလို စိတ်ထားရှိရင် မှူ့ခင်းစာစောင်တွေ ရေးစရာရှိမှာ မဟုတ်ဘူး ……….
ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိဘူးလို့တော့ မပြောကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။ Google မှာ Pink Bus Service / Women only bus/train/car လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး တမျက်နှာစာလောက် ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဖတ်မိသလောက် ဂျပန်၊ ထိုင်ဝမ်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ရုရှ၊ ပါကစ်စတန်၊ အစ္စရေး စတဲ့နိုင်ငံတွေက သတင်းလေးတွေ ဖတ်မိပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ရှာဖတ်ကြပါကုန်။
Women-only buses and (subway) trains have also appeared in Egypt, India, Brazil, Taiwan, the Philippines and Japan, along with taxis in the UK, Russia, India, Dubai and Iran.
e.g : http://www.springwise.com/transportation/women_only_bus_service_in_mexi/
Rose Petal ကောင်းပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည် သာဖြစ်တာ များသောအားဖြင့် က ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ အဆင့် အတန်း၇ှိတဲ့ စိတ်ဓာတ်မှမ၇ှိကြတာ။။
Phonetintnaung Mufl ဒါ ဖြစ်သင့် တယ်.. ဒီစနစ်အောင်မြင်ပါစေ
Htoo Chit ဒါဖြစ်သင့်တဲ့အရာတခုပါ…..မိန်းကလေးတွေအတွက်သီသန့်ပြေးဆွဲတာအရမ်းကောင်းပါတယ်းးးးးးးးးးးးး
Phyo Zarni Win ဒီလိုမျိုး မိန်းကလေးသီးသန့်လိုင်း ပြေးဆွဲတာ ကောင်းတယ်လို့ အပြည့်အဝ ပြောလို့မရပါဘူး။
မိန်းကလေးသီသန့်လိုင်း ကို မစီးလိုက်ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲ။
မိန်းကလေးသီးသန့်လိုင်း ကို စီးမှ လုံခြုံမှုရှိမှာလား။
ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးချင်းတာကို လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူများနိုင်ငံတွေမှာလုပ်တာကိုင်တာ ကိုကြည့်ပြီးမှ လုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ အမျိုးသမီးသီသန့်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် gender ကို ခွဲခြားပြီးဦးစားပေးပြီး အမျိုးသားတွေကို နိမ်ရာကြလွန်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ အတွက် သီးသန့်ကားတွေထားပြီး အမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးမယ်အစား အမျိုးသမီးနဲ့တွဲစီးမယ် ကျွန်တော်တို့အမျိုးသား တွေကို အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေးတတ်အောင်းပညာပေးတာတို့ ဦးစားပေးလိုစိတ်ရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတာတို့က ပိုထိရောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအရဆိုပေမယ့် အမျိုးသမီးအမျိုးသားသီးသန့်ထားခြင်းအားဖြင့် လူတွေရဲ့  လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်ကိုလည်းထိခိုက်အားနည်းစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသားတွဲပြီး ကမ္ဘာမှာ ရင်ဘောင်တန်းပြီးရပ်တည်ရမှာမဟုတ်လား…။ အထူးကား လူပိုတင်တာလည်းအပြစ်တင်လို့ရမယ်မထင်ဘူးထင်တယ်။ မနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်ဆို အဲဒီအထူးကားတွေ အလည်တန်းမှာအပြည်တင်ထားတာတောင် ရိုးရိုးကားတွေမှာလည်းပြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လိုင်ကားကိုသာ အဓီကထားနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက် လိုင်ကားတွေမလောက်ဘူးဆိုတာကို သိသာနေပါတယ်။ အဲ…လိုင်ကားတွေထပ်တိုးလိုက်ရင်လည်းဘဲ လက်ရှိအများသိကြတဲ့အတိုင်း လမ်းတွေက ပိတ်လို့ ခရီးရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ လမ်းကိုချဲ့ ဖြစ်ရပါမယ်။ လမ်းချဲ့ ရင်တောင်မှ အရေအတွက်တိုးလာတဲ့ ကားနဲ့ အစဉ်ပြေဦးမယ်မထင်ဘူး။ ဒါကြောင့် လမ်းပိတ်မှုကိုလျှောင်နိုင်မယ့် ရထားလမ်းလည်းလိုပါလိတ်မယ်။ ဘန်ကောက်လို စတိုင်မျိုးပေါ့။ အဲ့…ရထားရော ကားပါတိုးလာရင်တောင်မှ လိုင်းကားဆရာတွေက လူကြပ်အောင်ဆောင့်တင်နေဦးမယ်ဆိုတာ တွေးမိပါတယ်။ သူတို့လည်းတင်ချင်မပေါ့ ရသမျှက owner ကြေးပေးပြီးရင်သူတို့အတွက်ဘဲ။ လူဆိုတာလောဘရှိတယ်လေ။ ရသမျှတော့လိုချင်တာပေါ့။ အဲတော့ လိုင်းကားသမားကို လစာပေးပြီးမခန့်သရွှေ့ တော့ ကိုယ်တော်ချောတွေက လူမရ ရအောင်ရှာနေမှာဘဲ။ အစိုးရပိုင်ဖြစ်ဖြစ် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်ဖြစ် company တစ်ခုခုကိုပေးလိုက်ပြီး အဲဒီအဖွဲက လစာစနစ်နဲ့ အလုပ်သမားခန့်ပြီးလိုင်ကားဆွဲရင် ဘယ်လိုင်ကားစရာမှလောဘတက်ပြီး ရှာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ လူအ၀င်အထွက်ကိုတော့ စင်ကာပူစတိုင် ကပ်ဖြတ်တဲ့ စနစ်သုံးလိုက်ရင် ကားစပယ်ယာလည်း ပိုက်ဆံခိုးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကတ်စနစ် မသုံးနိုင်လည်းဘန်ကောက်စတိုင်လိုဘဲ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့စနစ်လေးလုပ်လိုက်ပေါ့။ ကားမဆွဲလည်း ပုံမှန်လစာ ရတာဘဲဆိုပြီး ကားကိုချောင်ထဲထိုးပြီးအိပ်နေမယ်သူတို့ လိုင်ကားမောင်းပြီးသွားချင်ရာသွားမယ်ကားသမားတွေအတွက်တော့ ကားပေါ်မှာ GPS တတ်ပြီး company ကနေမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေရင် ကားသမားများ ကားချောင်ထိုးပြီးအိပ်နေခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးပေါ့။ အထက်မှာပြောထားတာတွေက ပြောတာတော့လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်အထည်ဖေါ်ရင်တော့အချိန်ယူရမှာပေါ့။ တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ်အဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ နည်းပညာနဲ့ စေတနာလေးသာစိုက်လိုက်ရင် အားလုံးအစဉ်ပြေသွားမှာပါ။ နည်းပညာသီးသန့်ဟာ အလုပ်မဖြစ်သလို။ စေတနာသီးသန့်ဟားလည်းအလုပ်မဖြစ်ဘူးဗျ။ နည်းနည်းလေးတော့ပေါင်းမှဖြစ်မယ်နော်……….
Thi Ha လတ်တလော ရေတိုဖြေရှင်းနည်းလေး ပါ။
Pekay Pekaylay Pekaylay စပယ်ယာတွေတော့လူပိုလည်းပိုတင်လို့ရသွားပြီတစ်နေ့တာအမောလည်းပြေသွားတာပေါ့ကောင်းပါတယ်လေ
Nay Ma Kha ကောင်းတော.ကောင်းပါတယ်။
နိုင်ငံ့ခြားသားတွေတွေ.ရင် လဲ မြန်မာယောက်ျားထု ကိုအထင်သေးတော.မှာပဲ။
မျှား မိုး အခြေနေနဲ့ အချိန်ခါ ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဖြစ်လာရတယ်လို့ မြင်ပါတယ်…မည်သူ့ကို မည်သို့မျှ မပြောလိုပါ…စမ်းသပ် ကာလပြီးဆုံးပြီး ..ပညာပေး အသိပေး အနေနဲ့ ရှိစေချင်ပါတယ်..နောက်ပိုင်း မိန်းကလေးများ အတွက် မလိုတော့ဘူးဆိုရင်တောင် ..အဖိုး အဖွား များသီးသန့် ဆိုပြီး ထားလို့ရနိုင်ပါစေ…
Naing Min အင်း …. ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်ပြီး မထသ မှာပဲ အလုပ်လျောက်တော့မယ်ဗျို့ …
Zan Ye အတင်းတုပ်ဖို့ တစ်နေရာတိုးတာပေ့ါ
စာ ချစ်သူ လိင် ခွဲခြားဆက်ဆံတာ…. ဒီခေတ်မှာ ဒါမျိုးတွေ မရှိသင့်တော့ဘူးး)
ဒါကြီးကတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်…..bus car တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ် …..မြန်မာနိုင်ငံက နှမချင်းမစာနာတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေကို ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆိုတာ ဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်မျိုးရှိရတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပေး…နားလည်ပါတယ်… ယောက်ျားလေးတွေလည်း လူကြပ်ရင်ဘယ်လောက်ဒုက္ခကြီးတယ်ဆိုတာကို….အလကားအချောင်နှိုက်ချင်တဲ့ ယောက်ျားတွေကိုဘယ်လို ပညာပေးရင်ရမလဲဆိုတာလည်း လုပ်သင့်တယ်….မြန်မာနိုင်ငံကလူအများစုရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကတော်တော်ကိုပျက်စီးနေတာပါ….
ဒါကိုတော်တော်ပြောင်းလဲယူရဦးမယ်…….မိန်းကလေးတွေဘက်ကလည်း ပြန်ပြီးစဉ်းစားပေးသင့်ပါတယ်…..ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ခံရလို့ဘေးကလူကိုအကူ အညီတောင်းဖို့ဆိုတာက …..ပထမ လုပ်တာကိုခံနေရကတည်းက အရှက်ကကွဲနေပြီ…ဒုတိယတစ်ခါထပ်အကူအညီတောင်းရင်တစ်ရှက်ကနေနှစ်ရှက် ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မပြောကြတော့တာပါ…….မိန်းမပျိုကလေးတွေဆို ဒီလိုကိစ္စ မျိုးကိုပါးစပ်ကနေဘယ်လိုအင်အားမျိုးနဲ့ပြောပြီးအကူအညီတောင်းရပါမလဲ..
ဒါတွေကိုယောက်ျားလေးတွေဘက်ကလည်းစဉ်းစားပေးသင့်ပါတယ်…..ပြိးတော့ ယောကျာ်းလေး အများစု မှာ ကူညီတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူရှားကုန်ပါပြီ…. သက်ကြီးရွယ်အိုဆိုလဲ မထပေး … အထုပ်တွေဘာတွေဆိုလည်း ကူညီပြီးကိုင်ပေးရရင်သေတော့မလှိုဖြစ်နေတဲ့ လူတွေတစ်ပုံကြီးပါ….စိတ်ဓါတ်ကလေးတွေပြောင်းလဲလိုက်ကြရင် ဒါမျိုးတောင်လုပ်ဖို့လိုမှာမဟုတ်ဘူးးးးး…………..
Win Min ကောင်းပါတယ်………..ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်…….စပယ်ယာနဲ့ဒရိုင်ဘာပါပြောင်းလိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားမယ်
Chan Nyein Win အဓိကပြဿနာက ကားကြပ်လို့ထောက်လှမ်းရေးတွေရှိလာတာပါ။ ဒါတောင်မှရာခိုင်နှုန်းက နည်းနည်းလေး။ အခုလုပ်ပေါက်ကယောက်ျားလေးတိုင်းကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းလိုက်သလိုပဲ။
Wint War Khin Mostly bus are crowded in office hours.They launched the women-only bus service in office hour. Because aim to halt sex harassment. Appreciated for that!
Aothic Sizer လက်ရှိလိုင်းကားတွေကိုတောင် စောက်ဆင့်ရှိအောင် လုံလောက်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်ပဲ အမျိုးသမီး သီးသန့်ကလာသေးတယ်… အလှမ်းကျယ် အလည်လပ်ဦးမယ်…
Ye Tar hak hak.. ass~~
မသိရင် ငါတို့ကပဲ.. တနှာရူးတွေဖြစ်နေသလိုလို။
ကိုယ့်ထိုင်ခုံနဲ့ ကိုယ်စီးနေရင် ဘယ်ကောင်မှဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။။
Yee Yee Htun
ဒီသတင်းလေးကို ရှယ်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဘတ်စကားစီးအမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့အနာရာယ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လဲ ဝေဖန်ပြောချင်မိတာ ခန-ခနပါ။ ကျမ- ထောင်ထဲတုန်းက တိုက်မှာ သန့် ရှင်းရေးလာလုပ်တဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်-ဂိုဏ်းဆရာကြီးများပြောတာကတော့ သူတို့ သုံးတဲ့ ဗျူဟာထဲမှာ အာရုံပြောင်းအောင် ထောက်လှမ်းရေးလဲနည်းလဲ ပါတတယ်တဲ့။ လူဦးရေ သန်း၁၂၀၀-ရှိပြီး သန်း၃၄၀-ဟာ ဆင်းရဲသားထက်နိမ့်ကျတဲ့ ဘ၀မှာနေနေ-ကြတဲ့ အိနိယလို နိုင်ငံမှာတောင် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးရှိတယ်လို့မကြားမိပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ ထိုင်းလူမျိုးတွေဟာ စီဗယ်လိုက် (နိုင်ငံကြီးသား) အပြုအမူတွေနဲ့လေးစားစရာကောင်းလောက်အောင် ယဉ်ကျေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေပါပြီ။ မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီးလေးတွေဘ၀ကတော့ မယဉ်ကျေးသေးတဲ့ နိုင်ငံသား-အမျိုးသားတချို့ ကြောင့် မလုံခြုံပါ။ ကိုယ်မလုံခြုံဘူးဆိုရင် စိတ်မလုံခြုံမူကိုပါ ခံစားရလို့စိတ်ခွန်အားနည်းစေပါတယ်။ အမျိုးသမီးလေးတွေ လည်ပင်းမှာ ၀ီစီလေးတွေကို သတိရှိရှိချိပ်ကြပါ။ ပြီးတော့ သတိရှိရှိ ဖော်ထုတ်ကြပါ။ ဥပဒေသမားနဲ့ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရှိသူတွေဖက်ကလဲ ဥပဒေနဲ့ အကာကွယ်ပေးပြီး ကျူးလွန်သူတွေကို ပညာပေးအရေးယူပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။
သတို့ သား အပေါင်းတို့ 
နိဂိမိ မှ စတင် မတည်အံ့သော မိန်းမ၀တ် သံချပ်ကာ သော့ခတ် အတွင်းခံ ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းသို့ရှယ်ယာများ ၀င်ကြလေကုန် ။
အထက်ပါ ကျား/မ လိင်ခွဲခြားခြင်း လှုပ်ရှားမှုကြီး အတွင်း ပုလ္လိင် နပုလ္လိင် အပေါင်း ဆထက်တန်ခိုးတိုးပြီး စီးပွားရှာကြလေကုန် ။
အဲဒီထဲ.. ယူကေက.. အောက်ကအတိုင်းရေးထားတယ်..။
No longer provided, the last “Ladies Only” accommodation in British trains was withdrawn in 1977,acombination of different train types being introduced and equality legislation which prevented gender-specific provisions.
On the old type of local trains, no longer operating, individual compartments of the traditional type were right across the carriage (typically9or so per vehicle), with no through gangway, bench seats for5or on each side, and access only through many individual side doors. Because of concerns from individual women passengers who might be left with men in the compartment as passengers alighted,afew compartments (typically the end one in each train unit) was so allocated. Atatime when No Smoking compartments were denoted by red window labels, and First Class by blue labels, the Ladies Only compartments were shown by green window labels.
အိမ်သာကို ကျား/မ ခွဲထားရင်လည်း.. ဒစ်စ်ခရမနိတ်ဖြစ်မလား တွေးနေမိတယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ.. မဆလခေတ်က ဘတ်စ်ခုံတန်းကို ကျား/မ ခွဲထိုင်ရမယ်ဆိုတာလုပ်ဖူးတယ်လားလို့…
အခုလုပ်တဲ့.. ကားခွဲစီးခိုင်းတာလည်း မအောင်မြင်ပါဘူး..
၁၉၈၀ဝန်းကျင် မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူ တွေ အသုံးများ တဲ့ ပြည်လမ်း ကနေ မင်္ဂလာဒုံ ပြေးတဲ့ နံပါတ် ၉ ကား ဆိုတာမှာ ကျားသတ်သတ်၊ မသတ်သတ် သံဇကာခြား ပြေးဘူးတယ်။
ကိုင်ဇာတောင် သီချင်း လုပ်ဆိုဘူးတယ်။
အခုလည်း သပ်ဆိုးရှည်မည် ဟု မထင်ပါ။ လိုင်းအားလုံး ကိုလဲ လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။
ဒါမျိုး ကိစ္စဆိုတာ အကျင့် သိက္ခာ စာရိတ္တ ပိုင်း နဲ့ဆိုင်တာမို့ ဒီလို လုပ်တိုင်း အဲဒီလို အကျင့်တွေ ပျောက်မည်ဟု လုံးဝမထင်ပါ။
ဒါမျိုးဟာ မလုပ်သင့်ကြောင်း ကို လက်ခံလိုက်နာဖို့ သာ အသိပညာပေး စည်းရုံးရမှာပါ။
တကယ်တော့ အသိပညာပေး စည်းရုံးလို့ အများလိုက်နာရင်တောင် အနဲစုကတော့ ကျန်မြဲကျန် နေဦးမှာဆိုတာလဲ သိထားသင့်ပါတယ်။
ဂျပန်လို နိုင်ငံမျိုးမှာတောင် မနက်ရထားကြပ်ချိန် တစ်ချို့ လူကြီးများ အသားယူတတ်သည် ဟုလည်း ကြားဘူးပါ၏။
ကားကြပ်လို့ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်လို့ ရတာ ကားချောင်ရင် ဘယ်နှာဘူးမှ ဘူးလို့ မရဘူး
ကားချောင်နေလျက်နဲ့ လာဘူးရင် အဲဒီ ကမကလ ကို ကုန်းကုန်းလုပ်ပစ်လို့ ရတယ်..
အထူးသဖြင့် ရုံးဆင်း ရုံးတက် အချိန် ချောင်ချောင် ချိချိ စီးလို့ ရအောင် ခင်ဗျားတို့ မစီစဉ်တတ်ကြဘူးလားဗျာ
တော်တော်များများက ကျမဖင် လာနှိုက်နေပါတယ်လို့အော်ရဲပါ့မလားဗျာ
အဲတာကို ၀ီစီ မှုတ်ခိုင်းလိုမှုတ်ခိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ စေတနာကို ဒီ့ထက်ပို လက်တွေ့ ကျအောင် မစဉ်းစားတတ်ကြတော့ဘူးလားဗျာ
ပြောပြန်ရင်လဲ ဒေါ်စိန်ပေါက် လွန်ရာကျဦးမယ်
သူ့ ကားက ဘယ်အချိန်တွေထွက်ပြီး ဘယ်လိုင်းတွေပြေးနေသတုန်း
ဒေါ်စိန်ပေါက်ဆိုတဲ့ ဂျီးဒေါ်က ထချင်တဲ့အချိန်ထပြီး ဒိုးချင်တဲ့နေရာ လျှောက် ဒိုးနေတာ
သူ့ အဓိပတိစောင့်စီးမှ ခရီးရောက်မယ်ဆို လင်ပစ်သွားတာကြာပေါ့
ခင်ဗျားတို့ စေတနာ နားလည်ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့..ဒီ့ထက် လက်တွေ့ ကျတဲ့ ကူညီမှုမျိုးထပ်စဉ်းစားကြပါဦး..
တွဲထဲတက်ရင်.. လူမ၀င်တာကို.. ရထားဘူတာစောင့်၂ယောက်က..အားနဲ့ တွန်းတင်.. တခါးပေါက်မှာထွက်ကျန်နေတဲ့… လက်..ခြေထောက်..အတင်းငပိသိပ်သလိုဖိသွင်းတာ…
တချို့.. မိန်းကလေးညှက်ညှက်များဆို..အိအိ..ကွိကွိ ပဲအသံထွက်နိုင်လေရဲ့.. ။ :?
တော်တော်များများယောက်ျားတွေက.. လက်၂ဖက်လုံးအပေါ်မှာလက်တန်းဆွဲထားပြီး “ပြ”ထားကြသေးတယ်…။
များလို အီးခဏခဏ ထွက်တတ်တဲ့လူအတွက်တော့ ရင်လေးပါရဲ့
ခရီးသွားရင်း ရထားပေါ် အီးထွက်ကျသွားနိုင်တယ်
ပြောရင်းနဲ့ခုတောင် ဗိုက်ရစ်လာပြီ
အမကြီး အီးအီး ထွက်ကြောင်းပြောမှ ကားကြပ်ကြပ်ပေါ်မှာ အန်ချတဲ့ ဟာသလေးကို ပြောပြရဦးမယ်ဗျို့ …။
တစ်ခါက သင်္ချာဆရာတစ်ယောက် လူကြပ်ကြပ် ဘတ်စ်ကားပေါ် တက်စီးမိတယ်ဆိုပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာ သင်္ချာဆရာ အန်ချင်လာရောတဲ့ …။ ကားကလည်း မှတ်တိုင်ကို မရောက်သေး။ အန်ချင်တာကလည်း အတော့်ကို အန်ချင်လာပြီ။ အဲဒါနဲ့ အော်ပြောတယ် ..
” ဗျို့ .. ကားဆရာ … ကားရပ်ပေးပါဗျို့ … ကျုပ် အန်ချင်လို့ဗျို့ …”
ဒီအခါ စပယ်ယာက ပြန်အော်ပြောတယ် …
” မှတ်တိုင် ရောက်တဲ့အခါ အောင့်ထားဦးဗျို့ … ကြားထဲမှာ ကားရပ်လို့ မရဘူး .. ရဲဖမ်းလိမ့်မယ် ..”
အဲဒီအခါ သင်္ချာဆရာက ပြောတယ် …” အဲဒါဆို ကျုပ် ၄၉ အထိ ရေမယ် … ၄၉ ရောက်လို့မှ ခင်ဗျားတို့ကား မရပ်ရင် ကျုပ် အန်ပြီပဲ …”
အဲဒီလိုလည်း ပြောလိုက်ရော ဘေးနားကလူတွေ လန့်သွားတာပေါ့ … ဒါနဲ့ အဲဒီလူတွေက ဒရိုင်ဘာကို လှမ်းပြောကြတယ် ..” ကားဆရာရေ ဒီလူ ၄၉ ထိ မရောက်ခင် မှတ်တိုင်ရောက်အောင် မြန်မြန်မောင်းပါဗျို့ …”
အဲ .. ဒီအချိန်မှာပဲ အန်ချင်နေတဲ့ သင်္ချာဆရာက စတင် ရေတွက်လိုက်ပါတော့တယ် …
” ခုနှစ် ခုနှစ်လီ ၄၉ .. အော့ …..” ဆိုပြီးတော့ …
ကားပေါ်မှာ ငိုနေတဲ့ ခလေးကို သူ့ အမေက ချော့ပြီး နို့ တိုက်နေတာ
ခလေးက မစို့ ဘူး..ဂျီပဲကျနေတော့ သူ့ အမေက
သား မစို့ ရင် ကုလားကြီးကို တိုက်လိုက်မှာနော် ဆိုပြီးခြောက်တော့ ကုလားကြီးက တစ်ကယ်ထင်ကော
အမေကလဲ အဲလိုပဲ မစို့ ရင် ကုလားကြီးတိုက်လိုက်မှာနော် ဆိုပြီး ခြောက်
ခလေးကလဲ မစို့ နဲ့ ..ကြာတော့ ကုလားကြီးက စိတ်မရှည်ပဲ ထ.ပြောကော
“ ဟဲ့ ကန်ကလေး..နင်မြန်မြန်ပြောနော်..ကုလားက ရှေ့ မှတ်တိုင်ဆင်းရတော့မှာ ” ဆိုတာလေး
မဆီမဆိုင် သတိရဗျာ ဟီး.ဟီး..